Ungangibonisa izindlela ezinhle zokuthola ama-backlink amasha nge-SEO?
Asikho isidingo sokuthi lesi sakhiwo sokuxhumanisa sisanda kubaluleke nakakhulu ku-Search Engine Optimization (SEO) kunanini ngaphambili. Yingakho ukuthola ama-backlink amasha - ngokwemvelo nangokwemvelo - KUPHELA kuwo wonke umphathi webmaster nomnikazi wesayithi ofuna ukuthuthuka okukhulu ku-SEO, ngamaphrojekthi abo oku-intanethi abonwe phakathi kwemiphumela ephezulu yokusesha. Ake sibhekane nakho - ukuthola ama-backlink amasha asebenza kahle ekuthuthukiseni inthanethi kangcono akukhona nje ngokuthembana kwabo noma ukuthandwa kwabo. Ngisho ukuthi isakhiwo sokuxhumanisa ngokwemvelo ngempela sikhombisa ukuletha ukubaluleka kwangempela ngewebhusayithi yakho noma ibhulogi - ekugcineni, ukuhola abaqhudelwano be-niche futhi wenze iphrojekthi yakho ikwazi ukwabelana, ukukhuluma nokuxhumanisa. Ngakho-ke, asikho isidingo sokuthi ugijimise ukuzama ukubamba ubuningi be-backlink ezintsha. Kungaba ngcono kakhulu ukubeka ugcizelele kwikhwalithi yabo kanye nemvelo yemvelo - okokuqala nokuphambili. Ukwenza kanjalo, ake ngikubonise izindlela ezithile ezisebenzisekayo zokufunda emuva kwamanzi ama-backlink ngendlela engcono kakhulu engokwemvelo - ngokuqukethwe kwakho.
Okuqukethwe okuyingqayizivele okudiliza okungaphezulu
Ngaphambi kwanoma yini enye, yonke iwebhusayithi noma ibhulogi kufanele ibe nokuqukethwe kwekhasi eliqinile eliletha inani elikhulu ezithameli ezithakazelisayo abasebenzisi noma i-niche ehlosiwe yamakhasimende angase akwazi ukuguqulwa abe amaklayenti wangempela. Ngaleyo ndlela, ikakhulukazi amakhasi akho ewebhu angabonwa yi-Google njengento ethandeka kakhulu ekuchaseni okubanzi kwe-intanethi, kunanoma yikuphi amanye amawebhusayithi noma amabhulogi ahlobene nengxoxo yesifundo noma imboni efanayo yebhizinisi. Yini okungaphezulu - ukuthola ama-backlink amasha ngokuqukethwe okuyingqayizivele nekhwalithi ephezulu kusho ukuthi uzothola okungukuthi kusuka kuzixhumanisi zangokwezikhathi, owaziwa nangokuthi unamandla kunazo zonke ku-White Hat Hat.
Ukuhlelwa kokuqukethwe nokubukwa kokuqukethwe
Cabanga ngokuphinda usebenzise ingxenye yemibhalo yakho yombhalo (noma okungenani ababi kakhulu) kwezinye izindlela ezihle kakhulu futhi ezikhangayo kakhulu zokuqukethwe okubukwayo. Ngisho lapha ukuthi kunconywa ukuthi utshale isikhathi sakho ekudaleni izinhlobo ezivelele eziqukethwe okungahle kulindeleke ukukuletha ithrafikhi enkulu yewebhu, futhi ukuheha amanxephezelo amaningi ngesikhathi esisodwa - cishe ngendlela ehamba phambili. Ngaleyo ndlela, ubheke kangcono ukudala ama-infographics abukeka ngokukhangayo, amaspredishithi, ihluzo kanye nenani elengeziwe elizoqhubeka likwakhela emuva ngemuva kwesikhathi.
Ukubhaliswa Kwamakhompiyutha Okwakha Isiphathimandla Sakho
Ukufinyelela kubhulogi abathandwayo ku-niche yakho noma abathonya abaphezulu kakhulu embonini yebhizinisi lakho kusengcono kakhulu hhayi kuphela ukuthola ama-backlink ambalwa nge-PageRank enamandla kakhulu, kodwa ukwakha igunya lakho nokwethemba phakathi kwabasebenzisi. Ekugcineni - ukuze ube ngumthombo oholela olwazini ochwepheshe emkhakheni, ngakho-ke uhola futhi wenze iwebhusayithi yakho noma ibhulogi ibonakale emncintiswaneni wokusesha. Ngesikhathi esifanayo, noma kunjalo, ungakhohlwa ukuthi njalo uma uletha okuthunyelwe kwabavakashi abakhulu bebhlogi bakho - uthola lezo zindela ezifanelekile ukuhola izivakashi ezithembekile nakakhulu emakhasini akho Source . Vele uqiniseke ukuthi ubhala izihloko zezivakashi ezifunwa kahle kanye nokuthunyelwe kwebhulogi okuphoqelela kuphela ngenjongo efanele - futhi usuqedile!